दाङमा पत्रकारिता बहस पत्रकारिता नागरिकको अधिकार स्थापित गर्नको लागि हो – बिपुल पोखरेल - Ganatantra Online
दाङमा पत्रकारिता बहस पत्रकारिता नागरिकको अधिकार स्थापित गर्नको लागि हो – बिपुल पोखरेल
तुलसीपुर, २० माघ । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिपुल पोखरेलले पत्रकारिता नागरिकको अधिकार स्थापित गर्नका लागि हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
सोमवार तुलसीपुरको ज्ञान्दिप कलेज आयोजना गरेको पत्रकारिता,सम्भावना,अवसर र चुनौती बिषयक बहस कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै उपाध्यक्ष पोखरेलले नागरिकको हकहितलाई ध्यानमा राखेर गरिने पत्रकारिता जीबन्त हुने बताउनु भयो ।
‘पत्रकारिता जीवन्त रहिरहन्छ र यो स्थायी क्षेत्र हो, यो कहिले मर्दैन,’ उपाध्यक्ष पोखरेलले भन्नु भयो । उहाँले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा २० अर्ब लगानी भइ सकेको र पछिल्लो समय नीजि क्षेत्रको लगानी थपिने क्रम जारी रहेको बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय पत्रकारहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक राज्यले तोके अनुसार पाउने पद्धतिको विकाश भइ नसकेको भएपनि क्रमिक रुपमा पत्रकारिता पेशा गर्नेहरुले पनि राम्रो सेवा सुविधा पाउन थालेको भन्दै उहाँले खुसी साट्नु भयो ।
‘राज्यले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सबै मिडिया हावसहरुले सेवा सुविधा दिन नसकेका भएपनि स्थापित मिडियामा काम गर्नेहरुले त्यो भन्दा बढी सेवा सुविधा समेत लिने गरेका छन्,’ उपाध्यक्ष पोखरेलले भन्नु भयो ‘ एउटा सबल पत्रकारले आफ्नो क्षमता विकाश गर्दै लगेमा भबिस्य राम्रो छ ।’
कार्यक्रममा नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिककी सम्पादक लक्ष्मी आचार्यले पत्रकारितामा महिलाको आकर्षण आश लाग्दो रहेको बताउनु भयो । देशभर कै तथ्याङ्क हेर्दा १६ प्रतिशत सहभागिता मात्रै देखिएपनि पछिल्लो समय महिलाको सहभागिता बढ्दो मात्रामा रहेको बताउनु भयो ।
केही महिलाहरु सामाजिक,पारिवारीक कारणले पलायन भइरहेको भएपनि समग्रमा पत्रकारिता महिलाका लागि नराम्रो पेशा हो भन्न नमिल्ने उहाले तर्क गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बशन्त आचार्यले हिजो भन्दा आज रेडियो पत्रकारिताको अवस्था उल्लेखिय रुपमा बढेर गएको बताउनु भयो । रेडियोको संख्या पनि बढेको र प्रविधिले धेरै विकास गरिएको हुँदा अवसरहरु प्रसस्त रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा विद्यार्थी संबृद्धी बोहोरा,गोविन्द केसी,आकाँश भण्डारी लगाएतले जिज्ञाशा राखेपछि त्यसको जबाफ बिभिन्न पत्रकारहरुले दिनुभएको थियो ।
लेलिन बन्जाडे न्यू मिडिया तथा डिजिटल पत्रकारिताबारे धारणा राख्नु भएको थियो । प्रिन्ट मिडियाको अवस्थाको बारेमा गोपाल शर्मा भट्टराईले प्रकाश पार्नु भएको थियो । शोसल मिडियाले रेडियोलाई कस्तो असर पारेको छ ? भन्ने सवाल शरद रेग्मीले प्रकाश पार्नुभयो ।
डिजिटल पत्रकारिताको अवशर र चुनौती के छ ? भन्ने प्रश्नमा पत्रकार आभास बुढाथोकी पनि भनाईहरु राख्नु भएको थियो ।
धुर्बराज न्यौंपानेले अनलाइन मिडियाले अन्य मिडिया र संभावित चुनौतिका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । कलेजमा पत्रकारिता बिषय अध्यन गरिरहेका विद्यार्थी पूर्ण केसी, रमा नेपाली लगाएतले पनि धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
ज्ञानदिप कलेका साहायक क्याम्पस प्रमुख मनोज केसी अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार दूर्गालाल केसी,विद्यार्थी अंकित आचार्य र टेकप्रसाद भुसालले गर्नु भएको थियो ।